Qeybdiid “Cabdiwali Gaas wuxuu doonayaa inuu colaad ka huriyo Mudug” – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Qeybdiid “Cabdiwali Gaas wuxuu doonayaa inuu colaad ka huriyo Mudug”
10th July 2015 MAREEG Af Soomaali, Featured 0
Madaxweynihii hore ee Maamulka Galmudug Cabdi Xasan Cawaale (Qeybdiid) ayaa sheegay in Madaxweynaha Puntland C/wali Gaas uu hurinayo colaad ka dhacda Gobolka Mudug, isla markaana uu iska horkeenayo labada shacab ee wada dega Gobolka Mudug.
Cabdi Qeybdiid ayaa hadalkan ka jeediyay munaasabad lagu sagootinayay oo ka dhacday Koofurta Galkacyo, isagoo ugu baaqay Puntland inay joojiyaan shacabka la kicinayo iyo dagaalka la abaabulayo sida uu yiri.
“Waxaa rabaa inaan ugu baaqo walaalaheena reer Puntland inay ka gaabsadaan yacni dayaacada iyo shacabka la kicinaya oo dagaalka lagu abaabulayo, hogaanka qaldan ee Cabdiwali Gaas ee dadka lagu kicinayo in dagaal in lagu geliyo la rabo, waxaa rabaa reer Mudug ee aan deriska nahay in aan la dagaal gelin oo aan dhibaato laga dhex abuurin”ayuu yiri Cabdi Qeybdiid.
Mr Qeybdiid ayaa sheegay in shacabka Mudug ay yihiin dad walaalo ah, waxaana uu xusay inuu doonayo inuu ku sagootiyo deris wanaag iyo walaalnimo.
“Caqliga ha taliyo, walaalnimadu ha taliso, deris wanaaga hala dhowro, Cabdiwali waa aragnay miyirka waa ka tagaye, idinka yuusan idinka tagin”ayuu yiri mar kale.
Madaxweynihii hore ee Galmudug Cabdi Qeybdiid ayaa sheegay in dhamaan wixii maamulkiisii hore uu hayay uu ku wareejiyay Maamulka cusub ee Madaxweyne C/kariin Xuseen Guuleed.
AMISOM oo taliye cusub loo magacaabay